मेस्सीले छाडेपछि बार्सिलोनालाई कस्तो असर पार्छ ?:: Mero Desh
मेस्सीले छाडेपछि बार्सिलोनालाई कस्तो असर पार्छ ?
Published on: २४ श्रावण २०७८, आईतवार ११:०९
२४ साउन, काठमाडौं । लियोनल मेस्सीले अब बार्सिलोना बाट अर्को सि’जन खेल्ने छैनन् भन्ने समाचारसँगै शुरु भए को च`र्चा अ’झै सेलाएको छैन । यो समाचारले बार्सिलोना का समर्थकलाई भावनात्मक रुपमा धक्का लागेको छ । क्लबले भने आफ्नो इतिहासका सबभन्दा म’हत्वपूर्ण खे’लाडी मात्र गुमाएका छैनन्, अरु क्षति पनि व्यहोर्दैछ ।
अब स्पेनिस क्लब लाई अर्जे’न्टनी खेलाडी विना नै मैदानभित्र र बाहिरका धेरै चु`नौतीको सामना गर्न नयाँ योजना आवश्यक देखिन्छ । मेस्सीले छाड्दा बार्सिलोना लाई पर्न सक्ने केही असर :
मेस्सीको अनुपस्थितिले बार्सिलोनालाई खेलमा ठूलो असर पार्छ । मेस्सीले बार्सिलोनाको लागि १७ सिजनमा जुन किसिमको प्रदर्शन गरे, त्यो साँच्चै नै अविश्वसनीय थियो । उनी क्लबको लागि सबभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी हुन् ।
बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोआन लापोर्टाले मेस्सी ले बार्सिलोनाको समग्र आम्दानीको एक तिहाइ को हिस्सा बनेको बताएका छन् । मेस्सीको उपस्थितिले मात्र पनि क्लबलाई धेरै तरिकाबाट आम्दानी भइरहेको थियो ।
एक अनु’मानअनुसार बार्सिलोनाले मेस्सीकै कारण वार्षिक २५ देखि ३० करोड युरो आम्दानी गर्ने गरेको छ । अब यो आम्दानी बार्सिलोनाले गुमाउनेछ, जबकि बार्सिलोना अहि ले सबभन्दा कठिन आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेको छ । यति ठूलो आम्दानी पुनः प्राप्त गर्नु त्यति सजिलो छैन ।
ला’मो समयदेखि मेस्सी बार्सिलोनाको सबभन्दा महत्व पूर्ण फिगरको रुपमा रहँदै आएका छन् । उनी सर्वकालीन उत्कृष्ट खेलाडीका रुपमा मात्र होइन, उनको नम्रता, संय मित स्वभाव र शान्त व्यक्तिगत जीवनको कार´ण पनि उनले ठूलो संख्यामा समर्थकको माया पाएका छन् ।